IDiploma-Ingcali ye-BIM MEP-iGeofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma-Ingcali ye-BIM MEP
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo loyilo lwe-elektroniki, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwangokunjalo, kwabo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa uyilo lolwakhiwo kwimijikelezo eyahlukeneyo yoyilo, uhlalutyo kunye nokuchazwa kweziphumo kwamanye amanqanaba enkqubo.
Yakha amandla kuyilo, kuhlalutyo, kunye nokulungelelaniswa kweenkqubo zombhobho, zombane, kunye ne-electromechanical (HVAC). Le khosi ibandakanya ukufundwa kweRevit, eyona software isetyenzisiweyo kwicandelo lolwakhiwo lweBIM; kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho ulwazi lunxibelelana khona kwamanye amanqanaba enkqubo enje ngeNavisWorks. Ukongeza, ibandakanya imodyuli yokuqonda yonke imijikelo yolawulo lwezibonelelo phantsi kwendlela ye-BIM.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "Idiploma yeNgcali ye-BIM MEP” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma- Ingcali ye-BIM MEP
I-MEP-IiNkqubo zeMibhobho yoku-1 …. iUSD 130.00 24.99
I-MEP-IiNkqubo zeMibhobho yoku-2 …. iUSD 130.00 24.99
I-MEP - Iinkqubo zombane ……… .. I-USD 130.00 24.99
Inkqubo ye-MEP-HVAC ……………. iUSD 130.00 24.99
Indlela ye-BIM …………………… .. i-USD 130.00 24.99
Umqambi uNastran …………………… .. i-USD 130.00 24.99
Ikhosi ye-BIM ye-4D - usebenzisa i-Navisworks
Hlaziya iSikhosi se-MEP-uFakelo lwe-HVAC loomatshini